The Dictator (2012) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Aasif Mandvi, Adeel Akhtar, Elsayed Mohamed, Horatio Sanz, Liam Campora, Rick Chambers, Rizwan Manji, Rocky Citron, Sacha Baron Cohen, Sayed Badreya
ကွညျ့ဖူးတဲ့သူကတော့ ဒီပုံလေးမွငျတာနဲ့ မှတျမိမှာပါ။ အာဏာရှငျ ကငျဂြုံအီ၊ ကဒါဖီ တို့ကိုအခွခေံပွီး ဇာတျကောငျဖနျတီးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးသရျောတဲ့ ဟာသကားပါ။ ဒီကားထဲက အာဏာရှငျ ဗိုလျခြုပျကွီး အလာဒနျ ဟာ နယူးယောကျချ ကုလအစညျးအဝေးကို လာတကျစဉျမှာ ပွနျပေးဆှဲခံလိုကျရပွီး သူ့နရောကို ပုံစံတူလူစားထိုးခံလိုကျရပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြကတော့ သစ်စာဖောကျဦးလေးဟာ နိုငျငံကိုဒီမိုကရစေီအဖွဈပွောငျးလဲပွီး ကိုယျကြိုးအတှကျစီးပှားရေးလုပျဖို့ပါပဲ။ ဘယျသူမှမမှတျမိတော့တဲ့ အလာဒနျတဈယောကျ အခကျခဲတှကွေားထဲကစှနျ့စားပွီး သူ့နိုငျငံကွီး ဒီမိုကရစေီမရဖို့အရေး သကျစှနျ့ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလာရတဲ့အခါမှာတော့….
ဆိုးသှမျးလှနျးတဲ့ အာလာဘငျ မုတျဆိတျမှေး ဖွတျခံရပီး ဘယျသူမှမမှတျမိတော့တဲ့ခြိနျ ဘယျလိုသောကျတလှဲဒဆေကျဖွဈမလဲ…..
ကြည့်ဖူးတဲ့သူကတော့ ဒီပုံလေးမြင်တာနဲ့ မှတ်မိမှာပါ။ အာဏာရှင် ကင်ဂျုံအီ၊ ကဒါဖီ တို့ကိုအခြေခံပြီး ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသရော်တဲ့ ဟာသကားပါ။ ဒီကားထဲက အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလာဒန် ဟာ နယူးယောက်ခ် ကုလအစည်းအဝေးကို လာတက်စဉ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပြီး သူ့နေရာကို ပုံစံတူလူစားထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သစ္စာဖောက်ဦးလေးဟာ နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့တဲ့ အလာဒန်တစ်ယောက် အခက်ခဲတွေကြားထဲကစွန့်စားပြီး သူ့နိုင်ငံကြီး ဒီမိုကရေစီမရဖို့အရေး သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာရတဲ့အခါမှာတော့….
ဆိုးသွမ်းလွန်းတဲ့ အာလာဘင် မုတ်ဆိတ်မွေး ဖြတ်ခံရပီး ဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့တဲ့ချိန် ဘယ်လိုသောက်တလွဲဒေဆက်ဖြစ်မလဲ…..
Aasif Mandvi Adeel Akhtar Elsayed Mohamed Horatio Sanz Liam Campora Rick Chambers Rizwan Manji Rocky Citron Sacha Baron Cohen Sayed Badreya
Aasif Mandvi Adaku Ononogbo Adam LeFevre Adeel Akhtar Aja Frary Akim Black Alan Cox Alex Kruz Amanda Hope Dutton Andrew Ayala Andrew Rogers Ann Dev'Unay Anna Faris Anna Katarina Anthony Mangano Anton Obeid Arash Mokhtar B. J. Novak Barack Obama Barbara Ann Davison Barbara Vincent Ben Kingsley Bill Richards Bobby Lee Carmel Amit Chris Elliott Chris Gethard Chris Parnell Chris Victor Cordell King Cuco Usín Daniel Burress Danielle Burgio David Fonteno Dawn Jackson Dominique DiCaprio Dushawn Moses Ebrahim Jaffer Edward Norton Elena Goode Eliyas Qureshi Elsayed Mohamed Frank Anello Fred Armisen Fred Hanna Fred Melamed Frédéric North Gad Elmaleh Garry Shandling George Bartenieff Glenn Andreiev Haig Hovnanian Hanna Halldorsdottir Hannah Prichard Hillary Clinton Hollis Granville Horatio Sanz Ian Roberts Ivan Cardona Iyad Hajjaj J.B. Smoove Jaiden Kaine James Huffman Jasmine Hope Bloch Jason Mantzoukas Jeevan D'Souza Jeff Grossman Jenny L. Saldaña Jessica St. Clair Jim Piddock Joanna Moskwa Joey Slotnick John C. Reilly Jon Glaser Karl Jacob Kate Pak Kathryn Hahn Kelsey O'Brien Kevin Corrigan Liam Campora Lisa Landino Loukas Papas Marc Wolff Marceline Hugot Marcia DeBonis Marshall Factora Megan Fox Melissa Francis Michael Delaney Michael Hardart Michelle Bergh Miriam Tolan Mitchell Greene Moe Hindi Monika Felice Smith Mousa Kraish Nadav Malamud Nasim Pedrad Nazanin Homa Neimah Djourabchi Niyi Oni Olek Krupa Olivia Taylor Dudley Pete Wiggins Peter Conboy Peter Iasillo Jr. Regina Anne Rizzo Richard Worsley Rick Chambers Rizwan Manji Rock Kohli Rocky Citron Roger Brenner Sacha Baron Cohen Sayed Badreya Sean T. Krishnan Seth Morris Sevan Greene Shadner Ifrene Shawn Gonzalez Sondra James Stass Klassen Stephen Dexter Steven Weisz Sydney Berry Sylvia Ward Tara Copeland Tim J. Ellis Tony Joe Tony von Halle Tracey Ruggiero Uzimann Victoria Beltran Village William Fowle Yvette Parish Zachary Mackiewicz
Option 1 sharer.pw 382 MB SD (480p)
Option3storage.msubmovie.com 382 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 382 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 942 MB HD (1080p)
Option6server.mfile.cloud 942 MB HD (1080p)
Option7sharer.pw 942 MB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 942 MB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud 1.8 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 1.8 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 11 sharer.pw 1.8 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 12 yuudrive.me 1.8 GB FHD (1080p) AC3 5.1